ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: သံယောဇဉ် ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့လေသော အခါ (အပိုင်း - ၁)
ဝေ ဒီမြို့ ဒီနေရာလေးကို နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ရောက်လာလိမ့်မည်လို့ တစ်ခါမျှ မစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ စိမ့်ကနဲ အေးသွားသည့် အသိကြောင့် အနွေးထည်ရင်ဘတ်ကို ဆွဲစေ့လိုက်မိသည်။ သြော်ရာသီက ဆောင်းဝင်စ မကြာခင် မြူတွေဆိုင်းပြီး ပန်းတွေဝေတော့မည့် ဒီတောင်ပေါ်ဒေသလေး။ ချစ်သူနှင့် ပထမဆုံး ခရီးထွက်ခဲ့ဖူးသည့် သည်ဒေသ။ အလွမ်းတွေနှင့် ပစ်ခွာပြေးခဲ့ဘူးသည့် သည်ဒေသ။ တမ်းတမ်းတတ လွမ်းမောခဲ့ရသည့် သည်ဒေသ။ အခုတော့ ဒုတိယမိ ဒီမြေကို နင်းခဲ့မိပြန်သည်။ အဟောင်းတွေတော့ အသစ်ပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလေ။
ပြီးသည်ကလည်း ပြီးခဲ့ပြီး ကန့်လန့်ကာကြီးလဲ ချခဲ့ပြီ ကမယ့်သူလဲ မရှိတော့ပြီပဲ။ ဒီနေရာ ဒီဇာတ်ခုံမှာ ရပ်ရင်းဆွေးနေမိသည့် ဝေ သာလျှင် ရူးလှပါလားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ရှက်ခဲ့နေမိသေးသည်။
“ဆရာမလေး အပြင်မှာအေးတယ်။ တော်ကြာရေပြောင်း မြေပြောင်း ဖျားနာနေမှဖြင့်”
အတွေးတို့မည်မျှ ဖြန့်ကျက်မိနေသည် မသိ။ အိမ်မှာတူတူနေသည့် ဒေါ်နန်း လာခေါ်မှပင် အနည်း ငယ်မှောင်နေသည် ကို သတိပြုမိသည်။
“ဆရာမလေး အရင်က ဒီနေရာကို ရောက်ဖူးသေးတယ်ဆို။ ”
“ဟုတ်တယ် ဒေါ်နန်းရဲ့ အဲဒီတုန်းက ..”
ပြောနေရင်း အတိတ်ကို ပြန်မြင်ယောင်လာမိတော့ မျက်ရည်တို့ ဝေ့၀ဲသွားမိသည်။ ဒေါ်နန်းက အခြေအနေကို ရိပ်စား မိပုံနှင့် စကားကို တိကနဲ ပြန်ဖြတ်သည်။
“ဆရာမလေး ခရီးပန်းလာတယ် မဟုတ်လား စောစောအိပ်ပါလား။ မနက်လဲ စောစော ဆေးရုံထသွားရမှာ။”
“ဟုတ် ဒေါ်နန်း အဲဒါဆို ဝေ သွားအိပ်တော့မယ်နော်”
အပေါ်ထပ်ရှိ အိပ်ခန်းထဲမှ အိပ်ယာပေါ်လှဲချလိုက်မိသည်။ အတွေးတွေ မလာပါနဲ့။ ပင်ပန်းလှပြီ။ အိပ်ပါရစေတော့။ အတိတ်မှ အရိပ်တို့သည် ပျောက်ကွယ်သွားလောက်ပြီဟု တွေးထင်ထားမိသည်။ ထို့ကြောင့်လဲ ဒီနေရာလေးကို တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်ရှိခဲ့မိသည်။ သို့ပေမယ့် အတိတ်သည် သစ်လွင်နေစဲ။
“သမီး သေချာရဲ့လား။ ဒီမြို့လေးကို နောက်တစ်ခေါက်သွားဖို့ သမီးမှာ ယုံကြည်ချက်တစ်ကယ်ပဲ ရှိရဲ့လား ”
အဲဒီတုန်းကဖြင့် ဖေဖေ့ရဲ့ အမေးကို ပြတ်သားစွာနှင့် ပြန်ဖြေခဲ့သည် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့် ရှိပါသည် လို့။ ခုတော့ ဒီမြို့လေးကိုခြေချလိုက်ပြီ ဆိုကထဲက အမည်မဖော်နိုင်သော ဆို့နှစ်မှုတစ်ခုကို ခံစားရသည်။ အလွန်အမင်း ၀မ်းနည်းလွန်းသောစိတ်ဖြင့် အားရပါးရ ငိုချလိုက်မိ ချင်သည်။ သို့သော် မျက်ရည်မရှိ။ ဒီမြို့လေးကိုလာခဲ့မိတာ ငါမှားသွားပြီလား။ အရင်တုန်းက ဖေဖေနှင့် အလုပ်အတူတွဲလုပ်ဖူးသည့် ဒေါ်နန်းသာ သည်မြို့လေးမှာ ရှိမနေခဲ့လျှင် ဖေဖေ သည်လည်း ခုလိုစိတ်ချလက်ချ ဝေ တစ်ယောက်တည်း ဒီမြို့လေးကို လွှတ်လိမ့်မည်မဟုတ်။
မျက်ရည်မရှိပဲ ရင်တွင်းမှလှိုက်ပြီး ရှိုက်မိသည်။ ထိုသို့ရှိုက်လိုက်မိသည့် ခဏ ဝေ့ စိတ်ထဲ အမည်နာမတစ်ခုကို တမ်းတမ်းတတ ခေါ်မိသည်။ ကိုလေး ရေ.. သည်မြေကို ဒုတိယမိ ဝေ ပြန်ရောက်ခဲ့ပြန်ပြီ။ ညတာသည် ရှည်လွန်းလှပေ စွ။ လေးလံလှသောမျက်ခွံတို့သည် သူ့အလိုလို ပိတ်သွားသော်ငြား စိတ်နှင့် အတွေးတို့သည် မအိပ်တတ်သေး။
ရှေ့မြင်ကွင်းသည် မြူတို့ဖြင့်ဆိုင်းနေသည်။ ထိုနှင်းမြူများထဲတွင် မပီဝိုးတစ်ဝါး ပုံရိပ်တစ်ခု။ ပြီးတော့ ထိုပုံရိပ် သည် သူမ၏ နာမည်ကိုသိသည်။ အသံသည်လည်း ရင်းနှီးသည်ဟု ထင်သည်။ ၀ိုးတစ်ဝါး ထိုပုံရိပ်နားသို့ ဝေ သတိ အနေအထားဖြင့် ကပ်သွားမိသည်။ အနားနီးလို့ အသေအချာကြည့်လိုက်မိမှ
“ဟင် ကိုလေး.. ”
ဝေ ၀မ်းသာ အားရ ကိုလေးကို ပြေးဖက်လိုက်မိသည်။ ကိုလေးကလည်း အပြုံးဖြင့် စီးကြိုလို့ ပွေ့ဖက်သည်။ ကိုလေး ရင်ခွင်ထဲ ပြေးဝင်နားရသည့် ဒီခဏသည်ပင်လျှင် နူးညံ့နွေးထွေးမှု ကြည်နူးမှုတို့ဖြင့် ထုံမွှန်း၏။ ကိုလေးမျက်နှာသည်လည်း ပြုံးလို့။ ကိုလေး၏မျက်နှာကို မော့ကြည့်ရင်း ရှက်စနိုးဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ရင်ခွင်ထဲ ဝေ တိုးဝင်မိပြန်သည်။ ဟင် .ကိုလေး ကို ဖက်ထားသော လက်သည် တစ်ခုခုတို့သည် စွတ်စိုလာသည်ဟု သတိပြုမိသည်။ ကိုလေး၏ ကျောဘက်ကို အလျင်စလို လိုက်စမ်းမိသည်။ ဟင် ကျောပြင်တစ်ခုလုံးစွတ်စိုနေပါလား။ ဘာပါလိမ့် ။ လက်ကို အသာအယာ ပြန်နှုတ်ရင်း ၀ိုးတစ်ဝါးကြားထဲ လက်ဝါးပြင်ကို ပြန်ကြည့်မိသည်။ ဘုရား ဘုရား နီနီရဲရဲ သွေးတွေပါလား။
“ဟင် .. သွေး သွေး သွေး တွေ.. ကိုလေး”
ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားသော အခြေအနေတွင် ကိုလေးသည် သူမ၏ မြင်ကွင်းထဲမှ ရုတ်ခြည်း ပျောက်ကွယ်သွားလေ ပြီ။
“ကိုလေး.. ကိုလေး” မြူတို့ကြားထဲ ကိုလေးကို တွေ့လိုတွေ့ငြား သူမလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ အော်ခေါ်မိသည်။ အော်ခေါ် ရလွန်း၍ ဝေ့ အသံတွေ တိမ်ဝင်သွားသည်။ ဒူးတွေညွတ်ကျသွားသည်။ ကိုယ်မြတ်နိုးသောအရာတစ်ခုကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီ ဆိုသည့် အသိစိတ်သည် အားအင်တွေမဲ့သွားစေသည်။ ရင်တွင်းမှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ရှိသမျှအားတို့ကိုစုကာ ကုန်းအော်လိုက်မိသည်
“ကိုလေး .. ဘယ်မှာလဲ ဝေ့ ဆီကို ပြန်လာခဲ့ပါ။ ကိုလေး ရေ…”
“ဆရာမလေး ဆရာမလေး. ဆရာမလေး ဘာဖြစ်တာလဲ .. ဘာဖြစ်တာလဲ”
အခန်းတံခါးကို တစ်ဒုန်းဒုန်းထုသံနှင့် ဒေါ်နန်း၏ စိုးရိမ်တစ်ကြီးအသံကြောင့် ဝေ နိုးလာခဲ့သည်။ မနက်မိုးတောင် လင်းနေပြီပဲ။ ခန္ဓာကိုယ်သည် ချွေးတို့ဖြင့် ရွှဲနှစ်လျှက်ရှိသည်။ ကုတင်ပေါ်မှာဆင်းကာ အခန်းတံခါးကို သွားဖွင့် ပေးလိုက်သည်။
“ဆရာမလေး .. အိုး ဒီလောက်ချမ်းနေတာကိုး ချွေးတွေ ရွှဲနှစ်လို့ပါလား မှန်း. နေမကောင်းဘူးလား ဖျားနေလား ”
ဒေါ်နန်းသည် စိုး၇ိမ်တစ်ကြီးဖြင့် နဖူးကိုစမ်းကြည့်သည်။ သူမ၏ အပြုအမူကြောင့် ရင်ထဲ လှိုက်ကနဲ နွေးသွားမိသည်။ ဝေ ငယ်ငယ်လေးထဲက အမိငတ်ခဲ့ရသည် မဟုတ်လား။
“မ.. မဖျားပါဘူး အမေနန်းရဲ့ အိမ်..အိမ် မက်မက်နေတာ. ”
ဝေ ၏ အမေနန်းဟု ခေါ်ဆိုမှုကို ဒေါ်နန်းသဘောကျသွားပုံရသည်။ စိုးရိမ်နေရာမှ ပီတိအပြုံးသည် ရုတ်ချည်း အစားထိုး ၀င်ရောက်လာသည်။
“အေး အေး သမီး. အဲဒါဆို ရေမိုးချိုး အောက်ဆင်းခဲ့ မနက်စာအမေနန်း ပြင်ထားလိုက်မယ်။ ရေနွေးလေးနဲ့ ချိုးနော်။ ပြီးရင် ခဏဆို ဆေးရုံက ကားလွှတ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်”
သူ့ကိုယ်သူ အမေနန်း ဟု သုံးနှုန်းလိုက်သည့် အတွက် ဝေ ပိုပြီး သဘောကျသွားမိသည်။ ပြီးတော့ မိခင်ပေါ် ဆိုးနွဲ့ တတ်သည့် သမီးတစ်ယောက်အမူအရာဖြင့်
“ဟုတ် မေနန်း အဲဒါဆို သမီး ရေသွားချိုးတော့မယ်နော်.”
“အေး အေး သမီလေး”
ပီတိသံ ရောစွက်စွာဖြင့် အမေနန်း၏ အေးအေး သမီးဆိုသည့် အသံသည် ဝေ့ နားထဲတွင်တော့ သာယာလှသည့် စမ်းရေ စီးသံပမာပင်။ သံယောဇဉ် ငတ်သူနှစ်ဦး၏ သံယောဇဉ် အနှောင်အဖွဲ့သည် လျင်မြန်စွာ ဖွဲ့တည်ခဲ့လေပြီ ဖြစ် သည်။
“မေနန်း သွားပြီနော်. ”
ခြံထဲမှထွက်ခွာသွားသော ကားလေးကိုကြည့်ရင်း အမေနန်းပြုံးနေမိသည်။ ပြီး ချက်ချင်း မျက်နှာသည် ခက်ထန် သွားသည်။ အသံပြင်းပြင်း တောက် ခေါက်သံတစ်ချက် ထွက်သွားသည်။
ပြီး အိမ်တံခါးကို ၀ုန်းကနဲ အသံမြည်အောင် ဆောင့်ပိတ်ပစ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် သော့ တစ်ချောင်းကိုယူကာ တစ်အိမ်လုံးတွင်မှ သော့ခတ်ထားသော အခန်းတစ်ခန်းကို ဖွင့်လိုက်သည်။ ထိုအခန်းထဲတွင် ဂစ်တာအို တစ်လက်ရှိ သည်။ လူလတ်ပိုင်းအရွယ် ယောက်ကျားတစ်ယောက်၏ ဓာတ်ပုံအများအပြားရှိသည်။ နံရံမှာ ချိတ်ထားသည့်ပုံ စားပွဲပေါ်တင်ထားသည့်ပုံ ဆိုဒ်စုံ အရွယ်စုံ. ဓာတ်ပုံထဲမှထိုလူရွယ်၏ အပြုံးတို့သည် အေးမြလွန်းလှ သည် တည်ကြည်လွန်းလှသည်။ အထူးသဖြင့် မျက်ခုံးခပ်ထူထူ စူးရှလှသည့် အကြည့်တို့သည် စွဲမက်ဖွယ်ရာ။
ထိုဓာတ်ပုံတို့ကို တစ်မေ့တစ်မော မော့ကြည့်နေသည့် အမေနန်း သည် မျက်ရည်တို့စိုရွှဲ အိုင်ထွန်းလျှက်။ ပြီးနောက် တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်နေသော နှုတ်ခမ်းတို့မှ အသံတစ်သံထွက်လာသည်
နောက်ထပ် အပိုင်း(၂) မကြာခင်တင်ပေးပါမယ်လို့ ပြောရင်း ချစ်သောမောင်နှမများ ကျန်းမာလို့ ချမ်းသာကြပါစေရှင်.။
သရုပ်ဖော်ပုံလေးကတော့ဖြင့် google ကနေရှာဖွေအသုံးပြုထားပါတယ်ရှင့်
တို.လို. တန်းလန်းကြီး:'(
ပစ်ပစ် 30 October 2014 at 08:40
ဟင်.... ဖတ်ရတာ တန်းလန်းကြီး...
Aunty Tint 30 October 2014 at 10:04
တီတင့်တော့ ချက်ခြင်းဝဋ်လည်တာပဲ ဟာဟ... :P
စံပယ်ချို 30 October 2014 at 18:28
စိတ်ဝင်စားစရာလေး အမေနန်း နဲ့ဘာတော်မလဲမသိဘူးနော် သားထင်ရတာပဲ (ကိုလေးဆိုတဲ့သူကိုပြောတာ)